Caqabadaha & Fursadaha Ganacsi ee Cudurka Faafa ee COVID-19 | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 6, 2020 Talaado, Oktoobar 6, 2020 Douglas Karr
Muddo dhowr sano ah, waxaan ka dhawaajiyay in isbeddelku yahay kan keliya ee ay tahay inay suuqyadu ku raaxaystaan. Isbedelada tikniyoolajiyadda, warbaahinta, iyo marinnada dheeriga ah dhammaantood waxay ku cadaadiyeen ururada inay la qabsadaan baahida macaamiisha iyo ganacsiyada.
Sanadihii la soo dhaafay, shirkadaha ayaa sidoo kale lagu qasbay inay noqdaan kuwo hufan oo dad ah dadaalkooda. Macaamiisha iyo ganacsatadu waxay bilaabeen inay ganacsi sameeyaan si ay ula jaanqaadaan sadaqadooda iyo anshax ahaan caqiidadooda. Meeshii ay ururadu ka kala saari jireen aasaaskooda iyo howlahooda, hadda rajada laga qabo ayaa ah in ujeeddada loo aasaasay ay tahay horumarinta bulshada iyo sidoo kale daryeelka deegaankeenna.
Laakiin aafada iyo xirxirida la xiriirta waxay nagu qasbeen isbadal lama filaan ah oo aanan waligeen fileynin. Macaamiisha markii hore ka xishoon jiray inay qaataan ganacsiga elektaroonigga ah ayaa ku soo qulqulay. Goobaha bulshada sida goobaha dhacdooyinka, makhaayadaha, iyo shineemooyinka filimada ayaa istaagay howlihii - inbadan ayaa lagu qasbay in gebi ahaanba la xiro.
COVID-19 Jahwareerka Ganacsiga
Waxaa jira warshado yar oo aan hadda carqaladeynin faafida, kala fogaanshaha bulshada, iyo u wareegida macaamiisha & habdhaqanka ganacsiga. Waxaan shakhsiyan goobjoog u ahaa isbeddelo waaweyn oo lala yeeshay macaamiisha iyo asxaabta:
Saaxiibkiis ka shaqeeya warshadaha biraha ayaa arkay is-kaashatada iyo joojinta tafaariiqda iyo bakhaarrada e-commerce ayaa kexeeyey dhammaan kobaca amarkiisa.
Saaxiib ka mid ah warshadaha dugsiga ayaa ku qasbay inuu dhammaan iibintooda toos ugu wado macaamiisha maaddaama dugsiyadu u wareegeen khadka tooska ah.
Saaxiib ka tirsan warshadaha guryaha ganacsiga ayaa ku qasbay inuu dib u habeyn ku sameeyo dib u naqshadeynta goobaheeda si uu ula jaanqaado jadwalka shaqada ee rogrogmi kara halkaasoo shaqaaluhu hadda lagu soo dhaweynayo inay ka shaqeeyaan guryahooda.
Dhowr asxaab oo ka tirsan warshadaha makhaayadaha ayaa xiray qolalka ay wax ku cunaan waxayna u wareegeen iibinta iyo bixinta alaabada kaliya.
Qofka jaalka ah wuxuu ku qasbanaa inuu dib u habeyn ugu sameeyo goobta dalxiis ee loogu talagay dadka soo booqda keli ah kaliya iyadoo la nadiifinayo daaqadaha dhexdooda macaamiisha. Waxaan soo saarnay ganacsi buuxa iyo xallinta jadwalka oo aan bilawnay suuq-geyn toos ah, suuq-geyn emayl iyo istiraatiijiyado goob-raadineed oo maxalli ah - wax aysan waligeed horay ugu baahnayn maxaa yeelay waxay lahayd ganacsi af badan.
Saaxiib ka mid ah warshadaha hagaajinta guryaha ayaa daawaday alaab-qeybiyeyaasha oo kor u qaadaya qiimaha iyo shaqaalaha u baahan mushahar dheeraad ah sababtoo ah baahida loo qabo hagaajinta guriga (halka aan hadda ku nool nahay) iyo shaqada) si weyn ayaa loo maal galiyaa.
Xitaa wakaaladayda cusubi waxay ahayd inay gebi ahaanba dib-u-habeyn ku sameyso iibkeeda iyo suuqgeynteeda. Sanadkii la soo dhaafay, waxaan si weyn uga shaqeynay sidii aan uga caawin laheyn ganacsiyada si dijitaal ah wax ka badalka khibradooda macaamiisha. Sannadkan, waa wax walba oo ku saabsan otomaatiga gudaha, waxtarka, iyo saxnaanta xogta si loo yareeyo culeyska shaqada ee shaqaalaha ee aan shaqada laga dhigin.
Infograafigani ka yimid moobiilka360, Bixiye SMS ah oo jaban oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar, kuwa dhexdhexaadka ah, iyo kuwa waaweyn ayaa faahfaahinaya saamaynta aafada iyo xirxirida ee bilowga, ganacsiga, iyo ganacsiyada si faahfaahsan.
COVID-19 Saamaynta Dhaqaale ee Xun
In kabadan 70% ee bilowyadu waa inay joojiyaan qandaraasyada shaqaalaha ee waqtiga-buuxa ah tan iyo bilowgii cudurka faafa.
In ka badan 40% ee bilowyadu waxay kaliya haystaan ​​lacag caddaan ah oo ku filan hal illaa saddex bilood oo hawlgallo ah.
Waxsoosaarka waddanku wuxuu hoos u dhacay 5.2% sannadka 2020, taasoo ka dhigaysa hoos u dhicii ugu xumaa adduunka ee tobanaan sano.
Fursadaha Ganacsi ee COVID-19
In kasta oo ganacsiyo badan ay ku jiraan xaalad aad u adag, haddana waxaa jira fursado qaar. Taasi ma ahan in la fududeeyo faafida - taas oo ah mid gebi ahaanba xun. Si kastaba ha noqotee, ganacsiyada si fudud ugama tuuri karaan tuwaalka. Isbeddeladaan baaxadda leh ee ku yimid muuqaalka ganacsiga ma aysan engejin dalabkii oo dhan - kaliya waa in ganacsiyada ay muhiim u yihiin inay naftooda sii noolaadaan.
Ganacsiyada qaarkood waxay arkayaan fursad ay ku beddelayaan sida ay u shaqeeyaan:
Qaadashada nooc samafal si loogu deeqo sahayda loo baahan yahay iyo faa'iidada kuwa u baahan.
Hawlgallada hawlgalka si looga faa'iideysto dadweynaha ka shaqeynaya guryaha ee u baahan gaarsiinta cuntada iyo sahayda.
Dhiirrigelinta suuqgeynta si looga beddelo dalabka kaxeynta booqashooyinka tafaariiqda ee booqashooyinka dhijitaalka ah ee leh jadwalka internetka, ganacsiga, iyo xulashooyinka bixinta.
Soo saarida wax soosaarka ayaa sidoo kale bixisa sahay fayadhowr iyo qalab ilaalin shaqsiyeed.
Ubadalista goobaha shaqada furan meelaha banaan iyadoo lakala fogeynayo iyo kuwa gaarka loo leeyahay, qeybaha qeybta ah si loo yareeyo xiriirka bulshada.
Ogaanshaha sida looga jawaabo xaaladda ayaa shirkaddaada u suurtagelin doonta inay ku dhex marto cudurkan faafa. Si laguugu bilaabo, hagaha hoose wuxuu ka hadli doonaa caqabadaha aad la kulmi doonto ama aad u badan tahay inaad horeyba u soo wajahday iyo fursadaha aad ka fiirsanaysid inaad qaadato.
Ganacsi Inta lagu gudajiro COVID-19: Caqabadaha iyo Fursadaha
6 Talaabo oo Lagu Hagayo Ganacsigaaga
Ganacsiyadu waa inay la qabsadaan oo korsadaan, haddii kale waa laga tegayaa. Marnaba ku noqon meyno howlihii kahoreeyay 2020 maadaama ganacsiyada macaamiisha iyo dabeecadaha waligood isbadaleen. Halkan waxaa ah 6 talaabo oo Mobile360 kugula talineyso inay kaa caawiso inaad go'aamiso waxa kooxdaadu sameyn karto si ay uga sii hor socoto isbeddellada hadda socda:
Baahiyaha Macaamiisha Cilmi Baadhista - Ku quusin qoto dheer saldhiga macaamiishaada. La hadal macaamiishaada ugu fiican una soo dir sahankeena si loo ogaado sida ugu wanaagsan ee aad u caawin karto macaamiishaada.
Dhis shaqaale xoogaa rogrogmi kara - bixinta iyo qandaraaslayaashu waxay noqon karaan fursada ugu fiican ee lagu yareyn karo dalabyada mushahar bixinta ee saameyn ku yeelan kara socodka lacagta shirkaddaada.
Khariidadeyso silsiladdaada Bixinta - Tixgeli xadidaada dhanka saadka ee ganacsigaaga soo food saaray. Sideed u qorsheyn doontaa inaad maareyso oo aad uga shaqeysid saameynta?
Abuur Qiimo La Wadaago - Marka lagaa tago dalabyadaada, u gudbi isbeddelka wanaagsan ee ururkaagu ku keenayo bulshadooda iyo sidoo kale macaamiishaada.
Noqo Transparent - In la qaato istiraatiijiyad isgaarsiineed oo hufan oo rajo leh taas oo hubinaysa in qof walba uu kor u maro, hoosna u maro, ururkaaguna uu fahmo xaaladda ganacsigaaga.
Badalka Digital - kor u qaad maalgashigaaga qaababka dhijitaalka ah, otomatiga, is-dhexgalka, iyo falanqaynta si aad u hagaajiso howlahaaga. Waxtarka gudaha ee khibrada macaamiisha ayaa kaa caawin kara inaad ka gudubto oo xitaa aad u kordhiso faa'iidada maaddaama ganacsiyada iyo macaamiisha ay si isku mid ah u beddelaan dhaqankooda.
Tags: ganacsiCOVID-19GDPinfographicxiridtirakoobka qufulkamoobiilka360masiibotirakoobka faafaSMS